Otu esi arụnye ma ọ bụ mee ka Cockpit rụọ ọrụ na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Hazie Firewall maka kokpiiti
Otu esi enweta Cockpit Web UI
Cockpit bụ onye njikwa ihe nkesa dịpụrụ adịpụ n'efu nke dị fechaa ma dịkwa mfe iji maka sava GNU/Linux. Cockpit bụ a interface eserese dabere na webụ maka sava ezubere maka ndị ọhụrụ na Linux ndị ọkachamara dị ka sysadmins. Cockpit na-eme ka a chọpụta Linux, na-enye onye ọ bụla na-eji ngwanrọ ahụ aka ịrụ ọrụ dịka mmalite arịa, na-elekọta nchekwa, hazie netwọk, na nyochaa ndekọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye Cockpit na sistemụ Rocky Linux 8 gị.
Site na ndabara, Cockpit dị na ebe nchekwa iyi iyi nke ngwa yana, dabere na nrụnye gị, kwesịrị itinye ya na ndabara. Otú ọ dị, nkuzi ahụ ga-agba ọsọ site na nrụnye zuru oke ma ọ bụrụ na ọ na-efu ma ọ bụ wepụ ya.
Iji wụnye Cockpit, mebie iwu a na ọdụ gị.
Ozugbo arụnyere, site na ndabara, ọrụ anaghị arụ ọrụ, yabụ ị ga-achọ ịme iwu systemctl ole na ole dị ka ndị a.
Iji malite Cockpit:
Iji mee ka Cockpit nwee mmalite na sistemụ:
Na-esote, nyochaa ọkwa nke Cockpit iji jide n'aka na ọ na-agba ọsọ nke ọma na sistemụ Rocky Linux gị:
Ihe atụ mmepụta ma ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma:
Nzọụkwụ ọzọ bụ ikwe ka site na firewall Cockpit gị nwee ohere ige ntị. Site na ndabara, Cockpit na-ege ntị na ọdụ ụgbọ mmiri 9090.
Iji tọọ nke a, mebie iwu a na ọdụ gị.
Site na ndabara, Cockpit kwesịrị ịhapụ iwu ma ọ bụrụ na etinye ya na mbụ na nrụnye Rocky Linux 8 gị. Ọ bụrụ na ị hụ njehie na-esote, ị ga-adị mma ịga n'ihu.
Ugbu a ị kwadoro ma ọ bụ tinye Cockpit, oge eruola imepe ya site na iji ihe nchọgharị ịntanetị kachasị amasị gị.
Nke mbụ, chọpụta adreesị IP nke sava gị:
Ọzọ, na ihe nchọgharị gị, pịnye adreesị ihe atụ na ọdụ ụgbọ mmiri 9090 na njedebe.
Mgbe mbụ ị na-agbalị ịnyagharịa na Cockpit Web UI, ị ga-ahụ njikere dị ka ndị a:
A ga-amara gị ọkwa na njikọ ndị a abụghị nke nzuzo, pịa na Bọtịnụ dị elu.
Nabata Egwu ahụ ma Gaa n'ihu na-enweghị SSL ịga n'ihu na nbanye Cockpit.
Ọzọ, ị ga-ahụ Cockpit nbanye, na nke a bụ gị otu sudo aha njirimara or mgbọrọgwụ aha njirimara na paswọọdụ-abanye ka ịga n'ihu na dashboard.
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ dashboard ozugbo. Nhọrọ ndị bụ isi nke Cockpit dị n'akụkụ aka ekpe, ebe ị nwere ike ịgbakwunye ndị ọbịa ọzọ ma ọ bụrụ na ha nwere SSH ka njikọ, lelee ndekọ, hazie netwọk na arịa, malitegharịa, gbuo ma nọgide na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Dịka ekwuru n'elu, n'etiti ihuenyo ahụ, ị ​​nwere ike nyochaa ebe nchekwa na ojiji CPU wee hụ akụkọ ihe mere eme. Otu uru dị na iji Cockpit bụ inwe ihuenyo ọnụ na UI Weebụ. N'okpuru ibe ahụ, pịa ọnụ.
Dịka n'elu, ị nwere ọnụ nwere ike iji GUI dabere na Weebụ iji nyere gị aka n'ịchịkọta ihe kacha mma nke ụwa abụọ ahụ ọnụ.
Na nkuzi, ị mụtala ka esi etinye ma ọ bụ mee ka Cockpit maka Rocky Linux 8. N'ozuzu, Cockpit bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị ọrụ iji nọgide na-arụ ọrụ ha ngwa ngwa. Emebere ya maka ndị ọrụ ọhụrụ nwere sysadmins n'uche yana ikike ijikwa ya n'ime ime. Ọ bụrụ na ị na-abanye na Linux, iji Cockpit ga-abụ nhọrọ siri ike n'ịghọta ka sistemu si arụ ọrụ na ịchọpụta okwu ngwa ngwa n'ime ọpịpị ole na ole.
Categories Nkume linux Tags Cockpit, Nkume Linux 8 Mail igodo